Smartisan Nut Pro 2S ၏အဓိကအကြောင်းအရာများ Androidsis
Smartisan စက်အသစ်တစ်ခုလာပါပြီ ၎င်းသည် Nut Pro 2S အကြောင်းပါယင်း၏သေတ္တာ၏ဖော်ပြချက်ကြောင့်၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအများအပြားပေါက်ကြားခဲ့သောမိုဘိုင်း။
၎င်းရဲ့ပုံရိပ်တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း၊ ဒီစမတ်ဖုန်းတစ် ဦး နှင့်အတူပါရှိသည် Qualcomm ၏ Snapdragon 710 SoCနောက်ဆုံးပေါ်ရှစ် core core ချစ်ပ်သည်အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူမှဖြစ်သည် Xiaomi က Mi 8 အရှေ့တောင်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အခြားအရည်အသွေးများလည်းပေါ်လာသည်။ ရှာတွေ့သည်!
အောက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံများတွင်တွေ့ရသောအကွက်ပေါ်ရှိအချက်အလက်များသည်အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးသောမော်ဒယ်နှင့်ပရိုဆက်ဆာအမည်ကိုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်စနစ်ရှိသည် အနောက်ဘက်တွင် 12MP + 5MP နောက်ကင်မရာနှင့် 16MP ရှေ့မျက်နှာစာတပ်ဆင်ထားသည်.
အဆိုပါ terminal ကိုဖော်ပြချက်ကိုလည်းဖော်ပြသည် Android အခြေပြု Smartisan OS ကို operating system အဖြစ်အသုံးပြုထားသည်လုံးဝမျှော်လင့်ထားသည့်အရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စရာဖြစ်စေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် Android ဗားရှင်းကိုတိတိကျကျမဖော်ပြထားသော်လည်း Oreo ဖြစ်နိုင်ခြေသည်အလွန်မြင့်မားပြီးကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ပို၍ ပင်မြင့်မားပါသည်။ မကြာသေးမီက Android 9.0 Pie ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည် ၎င်းတွင်ပါရှိသော Qualcomm SD710 သည် Nougat ဗားရှင်းနှင့်ဝေးကွာသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။
အထူးသ Smartisan Nut Pro 2S သည်ယခင်က TENAA ရှိအမျိုးအစား 3C ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးဖြစ်သည်၎င်း၏ပစ်လွှတ်ဝေးဖြစ်မဟုတ်ဘူးသော။ ၎င်းသည် "OE106" ကုဒ်နံပါတ်အောက်တွင်သွားပြီး 18W မြန်သောအားသွင်းခြင်းဖြင့်လာသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီမှမည်သည့်ကြေညာချက်ကိုမဆိုမျှော်လင့်လျက်ရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာတရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီယခု မှစ၍ ဖြစ်ပျက်သမျှ အလယ်အလတ် ၎င်းသည်ထင်မြင်ချက်သက်သက်သာမဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Smartisan Nut Pro 2S box သည်၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြသည်